Sys-Con: Websaydhka ugu Xanaaqa badan, Weligaa? | Martech Zone
Sys-Con: Websaydhka ugu Xanaaqa badan, Weligaa?
Dhowr daqiiqo ka hor, waxaan helay Digniin Google ah oo ku saabsan maqaal ku saabsan sababta Ajax u dhaaftay Java. Waxay u egtahay maqaal weyn, miyaanay ahayn? Kuuma sheegi karo maxaa yeelay weligey ma aqrin. Tani waa waxa aan la kulmay markii aan tagay:
Maxaa ka dhigaya boggan wax lagu qoslo:
Markuu bogggu furmo, pop-up-ka ayaa igu dhaca midig indhaha dhexdooda iyadoo xiriir aad u yar oo hoose ku yaal salka. Pop-up-ka maahan pop-up-ka daaqada sidaa darteed xannibaadaha pop-up ma shaqeynayo. Sidoo kale, xayeysiinta ayaa si taxaddar leh loogu dhejiyay si loogu muujiyo ADS-yada KALE ee kuyaala dhinaca dhinaceeda runtiina waxay xannibeysaa waxyaabaha aan u imid inaan arko.
Haddii aad hoos u rogto, xayaysiintu waxay ku sii jirtaa isla booska qaraabada! Gabi ahaanba ma aqrin kartid waxyaabaha kujira adigoon gujin xayeysiinta.
Xayeysiinta fiidiyowgu wuxuu bilaabmayaa inuu ciyaaro isla marka goobta la furo leh cod! Waxba igama gelin in cod ka baxo websaydh I markaan codsado.
Bogga dhexdiisa waxaa ku jira 7 xayeysiis oo muuqaal cad… ah oo aan ka koobnayn.
Ma jiraan wax ka yar shan habab hagitaan bogga! Waxaa jira sanduuq liis ah, menu saxan oo toosan, menu jiif ah, menu sax ah oo jiif ah, menus dhinac ah… sidee qofna ugu suurtagal yahay inuu wax ka helo websaydhkan? Waxaan la yaabanahay haddii ay jiraan iyo in kale waa mid waxyaabaha ku jira goobta u dhexeysa dhammaan liiska iyo xayeysiinta!
Tani waa, sida loo maleynayo, degel websaydh u ah ilaha loogu talagalay Xirfadlayaasha Websaydhka! Ma rumeysan kartaa taas?
Bogag Teknoolojiyad ah oo la barbardhigi karo iyo Goob Macluumaad ah
Marka la barbardhigo, bal aan eegno CNET. CNET sidoo kale waxay leedahay qayb multimedia ah (oo aad riixdo ciyaarta on if aad jeclaan lahayd, iyo 7 xayeysiis oo muuqaal cad ah! Si kastaba ha noqotee, hagitaanka iyo qaabeynta bogga ayaa kor u qaadaya waxyaabaha halkii laga qarin lahaa.
Saamaynta iyo Isbarbardhiga
Haddii aadan u maleyneynin in naqshadeynta ay tahay astaamo muhiim u ah shabakadda wararka iyo macluumaadka, waxaan ku tuuri doonaa isbarbardhiggan Isbarbar dhigga tirakoobka Alexa:
Waa maxay boggaaga ugu dhibka badan? Fadlan… ku hayso Suuqgeynta iyo / ama goobaha tiknoolajiyada.
Maxay farriin badan ugu jiraan Email-kaaga oo AAD AKHRIN.
WordPress: Raadinta MySQL iyo Beddel adoo adeegsanaya PHPMyAdmin
Mahadsanid waad mahadsantahay mahadsanid!
Ugu dambeyntii! Haa, sys-con waa ka bogga ugu xanaaqa badan ee aan waligey ku dhex maro. Miyaad aragtay cagtii weyneyd ee *** middaas? Bogguna xitaa si sax ah ugama bixin Firefox.
Gebi ahaanba Oggol!
Sys-con waa mid ka mid ah websaydhada aan necbahay ee aan aado.
Mararka qaar boorar xitaa si sax ah uma bixin karaan waana adag tahay in lagu xiro Firefox
Way ka yara fiicantahay markaad isticmaaleyso Firefox oo isku jira Adblock (oo leh Filterset.G) iyo Flashblock. Keliya boodhadhka dhib badan ee dhib badan ayaa wali muuqda (dhammaan xayeysiisyada kale way dhammaadeen).